Lomano – Lalao Olympika 2016 (J.O) : hifanintsana eo amin’ny 100 m NL Rabetsara Estellah | NewsMada
Lomano – Lalao Olympika 2016 (J.O) : hifanintsana eo amin’ny 100 m NL Rabetsara Estellah
Hiaka-tsehatra hifanintsana eo amin’ny taranja lomano amin’ny Lalao Olympika 2016, Rabetsara Fils Estellah. Eo amin’ny taranjam-pifaninanana 100 m NL izy no hikatroka. Atleta malagasy fanintelony hiaka-tsehatra i Estellah.
Rabetsara Fils Estellah. Atleta malagasy fanintelony hiaka-tsehatra hifaninana amin’ny Lalao Olympika 2016 (J.O), any Rio, Brezila. Saingy, eo amin’ny amin’ny taranja lomano ity solontenantsika iray eo amin’ny sokajy vehivavy ity no hiady.
Araka izany, hiatrika fifanintsanana anio ny tenany ka eo amin’ny taranjam-pifaninanana 100 m NL (nage libre) izy no hiady filaharana hahafaha-miatrika ny dingana manaraka. Raha ny fandaharam-potoan’ny fifaninanana, mpilomano valo izy ireo no indray miady fisokajiana eo amin’ny « série n°1». Eo amin’ny « couloirs » fahadimy no misy an’i Estellah amin’io fifanintsanana io. Ankoatra an’i Estellah, misy atleta afrikanina iray ihany koa miara-mifaninana aminy, i Ana Nobrega. Ankoatra izay, mpilomano avy any Albanie, Moldavie, Azerbaïdjan, Norvège, sns, no miady amin’ireto atelta afrikanina roa ireto eo amin’ity fifanintsanana hotanterahina anio, ity.
Etsy andaniny, mila miady mafy manenjika fe-potoana tsara indrindra i Estellah raha te ho voasokajy hiatrika ny lalao manasa-dalana, hatao ny alakamisy 11 aogositra izao.
Hatreto kosa, raha ho an’ny filaharan’ireo firenena nahazo medaly indray, mbola mitana ny lohany hatrany i Etazonia nahazo medaly 19 ka volamena ny dimy, fito volafotsy ary fito alimo. Manaraka azy eo amin’ny laharana faharoa i Sina, nahazo medaly 13 ka volamena ny dimy, telo volafotsy ary dimy alimo. Aostralia ny fahatelo nahazo medaly fito ka efatra volamena ary telo alimo.